Wasiirka haweenka oo sheegtay in la bilaabay araaji qabashada guddiga xuquuqul insaanka qaranka (Daawo Muuqaal) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka haweenka oo sheegtay in la bilaabay araaji qabashada guddiga xuquuqul insaanka...
Wasiirka haweenka oo sheegtay in la bilaabay araaji qabashada guddiga xuquuqul insaanka qaranka (Daawo Muuqaal)
Wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin oo la hadashay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in wasaaradda ay gacanta ku heyso dhismaha guddiga madaxa banaan ee xuquul insaanka Soomaaliya.
Deeqa Yaasiin ayaa sheegtay in wasaaraddu ay diyaarisay guddi ka kooban 19 xubnood oo loo xil saaray in ay soo xulaan xubnaha guddiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka oo ka kooban 9 xubnood.
“Waxaan isugu yeernay 19 xubnood oo loo bixiyay guddiga ku meel gaarka ah ee soo xulista musharaxiinta guddiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka, maamul goboleed kasta labo xubnood ayaa laga soo direy,” ayay sheegtay Deeqa.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqa aadanaha ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in guddigan uu kaga duwan yahay guddiyadii hore in laga qeybgaliyay dhismahiisa qeybaha bulshada oo ay ku jiraan dadka baahida gaarka ah qaba.
“Waxaa soo dhameystirnay wajigii kowaad oo ahaa in xubnaha guddiga la isugu yeero tababar loo qabto, kadibna hadda waxaan galnay wajigii labaad ee xayeysiista 9 xubnood oo shalay aan ku dhawaaqnay,” ayay tiri wasiirka.
Deeqa Yaasiin, wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xustay in geedi socodkan lagu dhisayo guddigan uu yahay mid daah furan oo laga wada qeybgalay, iyadoona carabka ku dhufatay in ay ku dadaaleyaan sidii loo soo saari lahaa dad u qalma in ay noqdaan guddiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka.
Ugu dambeyn wasiirka ayaa tilmaantay in howsha wasaaradda ee ku aadan guddigan ay tahay fududeyn oo kali ah, hase ahaatee soo xulista xubnaha guddigan ay shaqadoodu tahay guddiga KMG ee 19 ka kooban isla markaana marka ay howshooda soo gutaan wasaaraddu u gudbin doonto golaha wasiirada kadibna la hor geyn doono golaha shacabka.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo ku baaqay in la soo qabto dadkii dilay guddomiyihii gobalka Galgaduud
Next articleGuddoonka Aqalka sare oo kulan la yeeshay guddiga dastuurka ee baarlamaanka (Daawo Muuqaal)